Wɔ nnansa yi aduruyɛ mu no, wɔde nnuru a wɔfa anaa oprehyen so na eyi nyinsɛn gu. Nnuru abien yi-mifepristone ne prostaglandin yɛ adwuma yiye wɔ eyi mu te sɛ oprehyen a wɔyɛ wɔ bosome abiesa a edi kan no mu. Ɛwom sɛ wobetumi de nnuru adi dwuma wɔbosome abiesa a ɛtɔ so abien mu de,nanso ɛte sɛ nea oprehyen mmom ntaa mmfa asɛm mma. Aduru a wɔde siw awo ano, a nea ɛka ho ne aduru a ɛyɛ topae ne adwinnade a wɔde hyɛ awotwaa mu yɛ nea wobetumi afi ase ntɛm pa ara wɔ nyinsɛntogu no akyi. Nyinsɛntogu wɔ aman a wɔanya wɔn ho mu yɛ nea abakɔsɛm kyerɛ sɛ ka aduruyɛ mu nnwuma a bammɔ wom ho bere a wɔma ho kwan wɔ mmara a ɛwɔ ɔman no mu. Nyinsɛn a woyi no kwan pa so ntaa mmfa adwenemyare anaa nipaduam haw biara mma. Wiase Akwanhosan Ahyehyɛde hyɛ nyansa sɛ ɛsɛ sɛ mmea a wɔwɔ wiase nyinaa nya hokwan koro ara yi a bammɔ wom na mmara ma kwan. Nyinsɛn a wonnyi no kwan pa so ma mmea bɛyɛ mpem aduanan nsɔn mmaatan a wɔhwere wɔn nkwana ɛma wɔde mmea ɔpepem anum nso kɔ ayaresabea afe biara.
Nyinsɛn ahorow bɛyɛ ɔpepem aduanan anan na woyi gu wɔ wiase nyinaa afe biara, a bɛyɛ emu fa na wɔnnyɛ no kwan pa so. Nyinsɛntogu ahorow a akɔ so nsesae ahe biara fi afe 2003 kosi afe 2008 mu, bere a akɔ fam wɔ mfe dudu mu bere a ntetee a ɛfa sɛnea wɔte abusua dodow so ne awo a wosiw ano anya nkɔanim no wiase nyinaa mmea ɔha mu nkyekyem aduanan nyaa hokwan yii nyinsɛn gui "a wɔansiw wɔn kwan". Nanso yɛwɔ anohyeto fa bosome dodow a nyinsɛn bi bedi ansa na wobetumi ayi agu.
Nyinsɛn a wɔhyɛ da yi gu kura abakɔsɛm. Wɔafa akwan ahorow so ayɛ eyi, a nea ɛka ho ne ahabannuru, nnwinnade a wɔde twitwa ade, nyinsɛn no a wɔde nsa keka, ne afoforompɔtam hɔ akwan ahorow fi tete. nyinsɛntogu ho mmara, mpɛn dodow a wɔyɛ no ne amammere ne ɔsom a ɛbata ho gu ahorow wɔ wiase afa ahorow. Wɔ akwan bi so no, mmara ma nyinsɛntogu ho kwan bere a nneɛma bi asisi te sɛ abusuafo ntam nna, mmonaato, ɔhaw bi a ɛwɔ mogyatɔw no ho, sikasɛm anaa maame no akwanhosan. Wɔ wiase afa horow mu no ɔmanfo mu akasakasa de fa ɔbrapa, wɔma kwan, ne sɛ ebia mmara ma nyinsɛntogu ho kwan anaa. Wɔn a wɔsɔre tia nyinsɛntogu kyerɛ sɛ mogyatɔw a ɛwɔ awotwaa mu yɛ nnipa a ɔwɔ hokwan sɛ ɔtena ase na yebetumi de nyinsɛntogu atoto awudi ho. Wɔn a wɔtaa nyinsɛntogu akyi nyinsɛntogu hokwan si so dua hokwan a ɔbea wɔ sɛ osi gyinae fa n'ankasa nipadua hoa wɔsan si so dua sɛ hokwan a nnipa wɔ mpɛn pii.